ကိုကျော်သူ၏ facebook အင်တာနက်စာမျက်နှာအား ပိတ်ခံလိုက်ရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Celebrity » ကိုကျော်သူ၏ facebook အင်တာနက်စာမျက်နှာအား ပိတ်ခံလိုက်ရ
ကိုကျော်သူ၏ facebook အင်တာနက်စာမျက်နှာအား ပိတ်ခံလိုက်ရ
Posted by Bayote on Apr 5, 2010 in Celebrity, Entertainment, Myanma News, News | 13 comments
မှတ်ချက် Source : http://www.niknayman-niknayman.co.cc/
ကျော်သူ့ က facebook ထဲဝင်ထားမှန်းတောင် မသိဘူး …
ခုမှ သိရတာ …
တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီထင်တယ်… တကယ်လို့ပိတ်မယ်ဆိုရင်တောင်.. အရင်ဆုံးသတိပေးစာတော့လာတတ်ပါတယ်.. ကြားထဲကအခိုးခံလိုက်ရတာများလား…
ကိုယ်ကပြန်ပြီ facebook team ကို တင်ပြစာပို့လို့ရတယ်လေ… password အပြောင်းခံလိုက်ရတာလဲ ဖြစ်နိုင်တာပဲ.. ကိုယ့်မေးခွန်းလေးတွေကိုယ်ပြန်ဖြေပြီးပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါလား.. ကိုယ်ကအရင်ပေးထားတဲ့ mail account နဲ့ facebook team ကိုလှမ်းပြောကြည့်ပါလား ..ပြန်ရရင်ရမှာပေါ့
ကျွန်တော်တို့ ကတော့ ကိုကျော်သူ့ homepage ကို ဖတ်လို့ လည်းရသလို commentလည်းပေးလို့ ရနေတုန်းပဲခင်ဗျ….တစ်ခုခုကတော့ သေချာလွဲနေပြီ…ပြီးတော့ facebook teamကလည်း homepageတွေကို သူ့ သဘောနဲ့ သူ ပိတ်လေ့မရှိတာသေချာတယ်……
yeohstoneပြောတာ ကျွန်တော်လည်း လက်ခံပါတယ်….facebook teamက homepageတွေ ၊ proflieတွေကို အကြောင်းမဲ့လိုက်ပိတ်လေ့မရှိပါဘူး…ဖြစ်နိ်ုင်တာတစ်ခုက ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေက account ကို ဖောက်ပြီး passwordပြောင်းလိုက်တာမျိုးနေမှာပါ….
what’s wrong???…..i can still give comment on ko kyaw thu’s facebook account….
ဒီဆောင်းပါးလေး ဖတ်ရတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ ကိုကျော်သူကို လေးစားပါတယ် သူလုပ်ရပ်ကလည်း လူတိုင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ လုပ်ရပ်ပါ။ သူလိုလူမျိုး ရှာတွေ့နိုင်ဖို့ခက်ပါတယ်။ ဘာအကျိုးမှ မဘက်ဘဲ သူအလုပ်သူ လုပ်နေတာဘဲလေ။ ခက်တော့ ခက်တယ် လောကကြီးကလည်း ဒီလိုပါဘဲ နဲ့ အဆုံးသတ်ရမှာဘဲလေ။
အဲဒီသတင်းတက်တာ April 5th, 2010 ကဖြစ်ပါတယ်။ အခု ဦးကျော်သူ ဖေ့စ်ဘုတ် ပြန်သုံးနေလို့ရတာ တွေ့ရပါကြာင်း..။
ကျော်သူရျိမှန်း သိရင်အစကတည်းက fun ၀င်ပါတယ်
ကိုကျော်သူရဲ့ နာရေးကူညီမှု ၀က်ဆိုက်နံမည်ကိုသိချင်ပါတယ်
facebookထဲက ကိုကျော်သူရဲ့ ဆိုက်ကိုလဲ ရှာမတက်ဘူး ပြောပြလမ်းညွှန်ပေးပါ။
ကျော်သူ web ပါ